၀ါလကင်းလွှတ် သီတင်းကျွတ်အခါသမယတွင် ဘုရားဖူးလာသူများဖြင့် စည်းကားသိုက်မြိုက်ခြင်း | BOTAHTAUNG PAGODA
၀ါလကင်းလွှတ် သီတင်းကျွတ်အခါသမယတွင် ဘုရားဖူးလာသူများဖြင့် စည်းကားသိုက်မြိုက်ခြင်း
Botahtaung Pagoda is one of the most famous pagoda in Myanmar. It has real Buddha Sacred Hair Relic.
ဗိုလ်တထောင်ကျိုက်ဒေးအပ်ဆံတော်ဦးစေတီတော်မြတ်ကြီးတွင် လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်းအား သဒ္ဒါတတ်အားသရွေ့လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း
ဗိုလ်တထောင်ကျိုက်ဒေးအပ်ဆံတော်ဦးစေတီတော်မြတ်ကြီးသို့ လာအို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး (Minister of National Defence of Lao P.D.R)Lieutenant General Chansamone Chanyalath နှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက် ဖူးမြှော်ကြည်ညိုခြင်း
16 Donation News
ဗိုလ်တထောင်ကျိုက်ဒေးအပ်ဆံတော်ဦးစေတီတော်မြတ်ကြီးတွင် မြန်မာသက္ကရာဇ် 1379ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၊ 2017ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (5)ရက် (ကြာသာပတေးနေ့) အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့တွင် နံနက်ပိုင်းမှစပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ဘုရားဖူးလာသူများဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်လှပါသည်။
ဝါတွင်းတရားပွဲ အစီအစဉ်များလည်းရှိသဖြင့် ဥပုသ်သီတင်းလာရောက် ဆောက်တည်သူများမှာလည်း အလွန်များပြားလှပါသည်။
အလှူဒါနပြုလုပ်သူများမှာလည်း စေတနာသဒ္ဒါတရား ထက်သန်စွာဖြင့် လှူဒါန်းကြပါသည်။
ဘုရားဖူးလာပြည်သူများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး လိုရာဆန္ဒများပြည့်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်အပ်ပါသည်။
9လက်မပတ်လည် ရွှေစင်ရွှေပြား အလှူရှင်များ
Botahtaung Pagoda located at the Corner of Botahtaung Pagoda and Strand Road
ကမ်းနားလမ်းနှင့် ဗိုလ် တ ထောင် ဘုရားလမ်းထောင့် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်
Copyright © 2017 MMCities. All Rights Reserved.